Rabeprazole - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Rabeprazole
Generic Name: Rabeprazole Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Rabeprazole ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Rabeprazole ကို တစ်ချို့သော အစာအိမ်နှင့် အစာရေမျိုပြွန်ရောဂါများ (ဥပမာ အစာခြေရည် ပြန်တက်ခြင်း၊ အစာအိမ်အနာ) အား ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။ အစာအိမ်မှထုတ်သောအက်စစ်များ နည်းစေခြင်းဖြင့် အာနိသင်ပြပါသည်။ ရင်ပူခြင်း၊ မျိုချရခက်ခြင်းနှင့် ချောင်းအကြာကြီးဆိုးခြင်းတို့အား သက်သာစေပါသည်။ ဤဆေးသည် အစာအိမ်အက်စစ်ကြောင့်ဖြစ်သော အစာအိမ်နှင့် အစာရေမျိုပြွန်အနာများအား ကျက်စေသည်။ အစာအိမ်အနာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေး၏။ အစာရေမျိုပြွန်ကင်ဆာအာ ကူညီကာကွယ်နိုင်၏။ Rabeprazole သည် proton pump inhibitors (PPIs) ဟူသောဆေးအုပ်စုတွင် ပါဝင်ပါသည်။
ဆေးပြားပုံစံများကိုသောက်မည်ဆိုပါက ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်း အစာရှိရှိမရှိရှိ သောက်နိုင်ပါသည်။ များသောအာဖြင့် တစ်ရက်လျှင် ၁-၂ ကြိမ်သာဖြစ်သည်။ ဆေးတစ်ပြားလုံးကို ရေနှင့်မျောချပါ။ ဝါးခြင်း၊ ကြိတ်ခြေခြင်း၊ ခြမ်းခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ ထိုသို့လုပ်ပါက ဆေးများ ချက်ချင်းထွက်လာနိုင်ပြီး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
ဆေးတောင်သောက်ပါက ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်း အစာမစာခင် မိနစ် ၃၀ အလိုတွင် သောက်ပါ။ များသောအားဖြင့် တစ်ရက်တစ်ကြိမ်သာ။ ဆေးတစ်တောင့်လုံးမျိုမချရပါ။ ဆေးတောင့်ကိုဖွင့်ပြီး အစာပျော့ပျော့သို့မဟုတ် အရည်ထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ။ ထိုအစာ သို့မဟုတ် အရည်ကို အခန်းတွင်အပူချိန်နှင့် အောက်တွင်သာ စားသောက်ရပါမည်။ ပြင်ဆင်ပြီး ၁၅ မိနစ်အတွင် အကုန်စားပါ။ ပြင်ဆင်ထားသော ဆေးအစာအရောကို ဝါးခြင်း ကြိတ်ခြေခြင်း မပြုလုပ်ရ။
ဆေးပမာဏနှင့် ရက်အပိုင်းအခြားမှာ သင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ကုသမှုအားတုံ့ပြန်မှုအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ကလေးများ၌ ဆေးပမာဏမှာ ကိုယ်အလေးချိန်ပေါ်၌ မူတည်ပါသည်။
လိုအပ်ပါက Antacids များကို ဤဆေးနှင့် တွဲသောက်ရနိုင်သည်။ sucralfate များသောက်နေရလျှင် ဆေးမသောက်ခင် မိနစ် ၃၀ ကြိပြီး rabeprazole ကိုသောက်ပေးပါ။
ဆေးမှ အာနိသင်အပြည့်အဝရရန် မှန်မှန်သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ချိန်မှတ်မိနေစေရန် နေ့စဉ် တူညီသောအချိန်တွင်သာသောက်ပါ။ နေကောင်းပြီဟု ခံစားရသည့်တိုင် ဆေးကို ရက်အပြည့်သောက်ရမည်။
အခြေအနေတိုးတက်မလာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။ အချိန်ကြာသည်နှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပိုများလာနိုင်ပါသည်။ ဆေးသောက်ရမည့်ကာလကို ဆရာဝန်အား မေးပါ။
Rabeprazole ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထား ပျက်ယွင်းမှုများ မဖြစ်စေရန် Rabeprazole ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Rabeprazole ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံ ကွဲပြားခြားနားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းခြင်းကို အမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင်ထားပါ။
Rabeprazole အားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Rabeprazole အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Rabeprazole ကိုမသောက်ခင်ဤဆေးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အုပ်စုတူသောဆေးများ (lansoprazole, omeprazole) တို့နှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း သို့မဟုတ် တခြားသောဓါတ်မတည့်မှုများရှိပါက ဆရာဝန်ကိုကြိုပြောပါ။ ဤဆေးတွင် သင့်နှင့်ဓါတ်မတည့်နိုင်သည့် inactive ဓါတ်ပစ္စည်းများ ပါနေနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးကိုမသုံးခင် သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်များကို ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်အား ပြောပြပေးပါ။ အထူးသဖြင့် အသည်းရောဂါနှင့် လူးပတ်စ်ရောဂါ။
တစ်ချို့လက္ခဏာများက ပြင်းထန်သည့်အခြေအနေတစ်ခု၏လက္ခဏာများ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းမူးခြင်း၊ မူးလဲခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ မေးရိုး၊ လက်မောင်း၊ ပုခုံး၊ ရင်ဘတ် အောင့်ခြင်း (အထူးသဖြင့် အသက်ရှူမဝခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ချွေးထွက်ခြင်း)၊ အကြောင်းရင်းမရှိပဲ ဝိတ်ကျခြင်း တို့နှင့်အတူ ရင်ပူခြင်းတို့ တွဲနေလျှင် ဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူပါ။
Proton pump inhibitors (ဥပမာ rabeprazole) သည် အထူးသဖြင့် လူအိုများ၌ ပမာဏများများနှင့် အချိန်အကြာကြီးသုံးပါက အရိုးကျိုးနိုင်ချေ မြင့်စေနိုင်ပါသည်။ အရိုးကျိုးခြင်းအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ဗီတာမင်ဒီ ဖြည့်စွက်ဆေးများသောက်ရန်လိုမလို ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်တို့နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးသည် နို့ရည်ထဲသို့ ဖြတ်နိုင်မဖြတ်နိုင် မသိရသေးပါ။ သို့သော် ဆင်ဆင်တူသောဆေးများက နို့ရည်ထဲသို့ ဖြတ်နိုင်နေပါသည်။ နို့စို့ကလေးအပေါ်တွင် ဖြစ်နိုင်သောသက်ရောက်မှုများကိုလည်း မသိရပါ။ နို့တိုက်ကျွေးမှုမစတင်ခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Rabeprazole ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များ မရှိပါ။ ဆေးမသုံးစွဲမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် N ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
Rabeprazole ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ခေါင်းကိုက်တတ်ပါသည်။ အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ပျောက်မသွားလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ပြင်းထန်သည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်သော သွေးတွင်းမဂ္ဂနီစီယမ်နည်းသည့်လက္ခဏာများ -(နှလုံးခုန်နှုန်း နှေးခြင်း၊ မြန်ခြင်း၊ မူမမှန်ခြင်း၊ ကြွက်သားလှုပ်ခြင်း၊ တက်ခြင်း)၊ လူးပတ်စ်ရောဂါ လက္ခဏာများ (နှာခေါင်းနှင့်ပါးတို့တွင် အကွက်ထခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်းမှာ ပိုဆိုးလာခြင်း၊ အသစ်ပေါ်လာခြင်း) တို့ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ရှားပါစွာဖြင့် proton pump inhibitors (rabeprazole) များသည် ဗီတာမင် ဘီ 12 ချို့တဲ့မှု ဖြစ်စေတတ်၏။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် အချိန်အကြာကြီး (၃ နှစ်နှင့်အထက်) သောက်ရပါက ပိုဆိုးနိုင်သည်။ ဘီ 12 ချို့တဲ့သည့်လက္ခဏာများ (ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ အားနည်းနေခြင်း၊ လျှာနာခြင်း၊ ခြေလက်များ ထုံခြင်း ကျဉ်ခြင်း) တို့ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Rabeprazole နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
ဤဆေးနှင့်ဓါတ်ပြုနိုင်သောဆေးကုန်မှာ methotrexate (အထူးသဖြင့် ပမာဏများခြင်း) ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့သောဆေးကုန်များသည် ခန္ဓါကိုယ်မှစုပ်နိုင်စေရန် အစာအိမ်အက်စစ်ကို လိုအပ်၏။ Rabeprazole က အစာအိမ်အက်စစ်ကို နည်းစေသောကြောင့် ထိုဆေးကုန်များ၏အာနိသင်ကို ပြောင်းသွားစေနိုင်သည်။ ဥပမာ -ampicillin, atazanavir, erlotinib, nelfinavir, pazopanib, rilpivirine, တစ်ချို့သော azole မှိုသတ်ဆေးများ (itraconazole, ketoconazole, posaconazole) စသည်တို့။
ဤဆေးသည် တစ်ချို့သောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများကို နှောက်ယှက်နိုင်သောကြောင့် အဖြေမှားနိုင်၏။ ဤဆေးသုံးနေရပါက ဓါတ်ခွဲဝန်ထမ်းများ ဆရာဝန်များသိအောင် သေချာပြောပြပါ။
Rabeprazole သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Rabeprazole နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Rabeprazole က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Rabeprazole နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Rabeprazole သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Rabeprazole ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
တစ်ရက်လျှင် 20 mg တစ်ကြိမ်သောက်ရန်။
ဆေးသုံးရန်ကာလ – ၄ ပတ်
မှတ်ချက်: ၄ ပတ်မြောက်၌ လူနာအများစုတွင် အနာကျက်သွားသော်လည်း တစ်ချို့တွင်တော့ အနာကျက်စေရန် အပိုဆောင်းကုသမှုများ လိုနိုင်ပါသည်။
အသုံး: အူသိမ်ဦးအနာများ ကျက်ရန်၊ လက္ခဏာများ သက်သာစေရန်။
စားသွားသော အစာရေမျိုပြွန်ရောင်ခြင်းအတွက်ပုံမှန်ပမာဏ
ဆေးသုံးရန်ကာလ – ၄-၈ ပတ်
မှတ်ချက်: ၈ ပတ်မြောက်တွင် အနာမကျက်ပါက နောက် ၈ ပတ်ဆက်ကုသရန် စဉ်းစားနိုင်သည်။
အသုံး: စားသွားသော၊ အနာဖြစ်သော အစာရေမျိုပြွန်သို့ အက်စစ်ပြန်တက်သော ရောဂါ (GERD) တို့တွင်အနာကျက်ရန်၊ လက္ခဏာများ သက်သာစေရန်။
အသုံး: စားသွားသော၊ အနာဖြစ်သော အစာရေမျိုပြွန်သို့ အက်စစ်ပြန်တက်သော ရောဂါ (GERD) တို့တွင် အနာကျက်ရန်၊ လက္ခဏာများ သက်သာစေရန်။
အူသိမ်ဦးအနာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရန်အတွက်ပုံမှန်ပမာဏ
ဆေးသုံးရန်ကာလ – ၁၂ လအထိ။
မှတ်ချက်: လေ့လာချက်များအရ ထိန်းညှိကာလကို ၁၂ ထိမကျော်သင့်ကြောင်းသိရသည်။
အသုံး: စားသွားသော၊ အနာဖြစ်သော GERD လူနာများတွင် အနာကျက်ရန်၊ ရင်ပူသောလက္ခဏာများ ဖြစ်သည့်အကြိမ်ကို လျှော့ချရန်။
အစာရေမျိုပြွန်သို့ အက်စစ်ပြန်တက်သော ရောဂါ (GERD)အတွက်ပုံမှန်ပမာဏ
မှတ်ချက်: ၄ ပတ်မြောက်တွင် အနာမကျက်ပါက နောက် ၄ ပတ်ဆက်ကုသရန် စဉ်းစားနိုင်သည်။
အသုံး: ရင်ပူခြင်းနှင့် GERD ကြောင့်ဖြစ်သော တခြားလက္ခဏာများအာ ကုသရန်။
Helicobacter pylori ပိုးရောဂါအတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
တစ်ရက်လျှင် 20 mg နှစ်ကြိမ်ကို Amoxicillin, Clarithromycin တို့နှင့်တွဲပြီးသောက်ရန်။
ဆေးသုံးရန်ကာလ – ၇ ရက်
– Amoxicillin, Clarithromycin ပမာဏအတွက် ထုတ်ကုန်အချက်အလက်အတိုင်းသာဖြစ်သည်။
– ဆေးများကို မနက်ခင်း၊ ညနေခင်းတို့တွင် အစာနှင့်တွဲပြီးသောက်ရမည်။
– Helicobacter pylori အပြတ်ရှင်းခြင်းက အူသိမ်ဦးအနာပြန်ဖြစ်ခြင်းကို လျော့ချနိုင်ကြောင်း တွေးထားပါသည်။
– ဆေးပေးသော်လည်း မသက်သာလျှင် နိုင်မည့်ဆေးစမ်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် တခြားပိုးသတ်ဆေးများတွဲခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရပါမည်။
အသုံး: Helicobacter pylori အမြစ်ဖြတ်ခြင်း၊ ၅ နှစ်အတွင်း အူသိမ်ဦးအနာရှိဖူးခြင်း သို့မဟုတ် လက်ရှိအနာဖြစ်နေခြင်းတို့အား ကုသရန်။
Zollinger-Ellison Syndrome အတွက် ပုံမှန်ပမာဏ
ကနဦးပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 60 mg တစ်ကြိမ်
ထိန်းညှိမပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 60 mg နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် 100 mg တစ်ကြိမ်သောက်ရန်။
ဆေးသုံးရန်ကာလ – ၁ နှစ်အထိ
– ဆေးပမာဏမှာ လူနာတွင်သာမူတည်ရမည်။ ဆေးပညာအရလိုအပ်သည်အထိ ပေးသင့်သည်။
– တစ်ချို့လူနာများတွင် ဆေးမပါဏကို ခွဲပြီးပေးရနိုင်သည်။
အသုံး: pathological hypersecretory အခြေအနေဖြစ်သော (Zollinger-Ellison syndrome)
– ဆေးကို ဝါးခြင်း၊ ကြိတ်ချေခြင်း၊ ခြမ်းခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
– ဆေးပြားများကို အစာရှိရှိမရှိရှိ သောက်နိုင်သည်။
– ဆေးတောင့်/ဆေးစေ့များကို အစာမစားမီ မိနစ် ၃၀ အလိုတွင်သောက်သင့်၏။
သိုလှောင်ရန်လိုအပ်ချက်: ထုတ်လုပ်သူအချက်အလက်နှင့် ချိန်ကိုက်သင့်သည်။
– ရေရှည်သောက်ရသောလူနာများတွင် ဆေးလိုအပ်ချက်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။
– ဆေးကို မနက်စာမစားခင် တစ်ကြိမ်သောက်ခြင်းက လူနာလိုက်နာနှုန်း ပိုကောင်းပါသည်။
– အသည်း ကျောက်ကပ် မကောင်းသူများတွင် ပဋိဇီဝဆေးများနှင့် တွဲသုံးရမည်ဆိုသည့် အချက်အလက်များလည်း မရှိပါ။
– အစာရေမျိုပြွန်သို့ အက်စစ်ပြန်တက်သော ရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသရန် ၆ လအထက် ပေးရမည်မဆိုပါက ဆေးကိုပြန်တွက်ချက်သင့်သည့်။
– မဂ္ဂနီစီမ်လယ်ဗယ် အထူးသဖြင့် hypomagnesemia ရစေသော တခြားဆေးများပါ တွဲသောက်နေရသူများ၊ ရေရှည်သောက်နေရသူများ။
– ဗီတာမင် ဘီ 12 လယ်ဗယ်၊ အထူးသဖြင့် ရေရှည်သုံးနေရသောလူနာများ
– အရိုးကျိုးခြင်း၊ အထူးသဖြင့် အရိုးပွသော အခြေအနေရှိသူများ
– ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ဗီတာမင်ဒီလယ်ဗယ်။ အထူးသဖြင့် ရေရှည်သုံးနေရသုများ
– Warfarin ပါတွဲသုံးနေရသူများတွင် INR နှင့် prothrombin time ကိုစောင့်ကြည့်ရမည်။
– Helicobacter pylori ကုသရန်အတွက်ဆိုပါက ဆေးကို ၇ ရက်အပြည့်သောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
– ဓါတ်မတည့်သည့်အခြေအနေ၊ Clostridium difficile သို့မဟုတ်လူးပတ်စ်ရောဂါများ၏ လက္ခဏာများပေါ်လာပါ ဆေးကုသမှုချက်ချင်းခံယူရန် လူနာကိုအကြံပြုပါ။
– ကိုယ်ဝန်ရလျှင်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် နို့တိုက်နေရလျှင် ဆရာဝန်နှင့်ပြန်ပြဖို့ လူနာကို အကြံပြုပါ။
ကလေးတွေအတွက် Rabeprazole ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
15 kg အောက်:5mg ကို တစ်ရက်တစ်ကြိမ်။ မလုံလောက်ပါက 10 mg အထိ တိုးနိုင်ပါသည်။
15 kg နှင့်အထက်: 10 mg ကို တစ်ရက်တစ်ကြိမ်။
ကုသရန်ကြာချိန် – ၁၂ ပတ်အထိ
၁၂ နှစ်နှင့်အထက်: 20 mg ကို တစ်ရက်တစ်ကြိမ်။
ကုသရန်ကြာချိန် – ၈ ပတ်အထိ
– GERD ကုသရန်
– GERD လက္ခဏာများအားကုသရန်။
အပျော့စားမှအလတ်စား အသည်းမကောင်းခြင်း (Child-Pugh A and B): ချိန်ညှိရန်မလိုပါ။
အပြင်းစားအသည်းမကောင်းခြင်း (Child-Pugh C):သတိနှင့်သုံးပါ။
အသက် ၁ နှစ်အောက် (အမှုန်ဖော်မြူလာ) နှင့် ၁၂ နှစ်အောက် (ဆေးပြားဖော်မြူလာ) တို့တွင် စိတ်ချရမှုနှင့် အာနိသင်ရှိမှုတို့ကို ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးပါ။
Rabeprazole ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
delayed release သောက်ဆေးပြား
delayed release သောက်ဆေးတောင့်
Rabeprazole ကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုး မလုပ်ပါနှင့်။